Ubelethe amawele amane maqede washona | News24
Ubelethe amawele amane maqede washona
Phoenix – Owesifazane oneminyaka engu-36 ubudala ubelethe amawele amane kodwa ngenxa yokulahlekelwa yigazi eliningi akakwazanga ukuphila abone izingane zakhe zikhula njengoba egcine ngokushona.
Ngokubika kwe-www.metro.co.uk u-Erica Morales ubelethe amantombazane amathathu nomfana oyedwa endaweni yasePhoenic e-Arizona.
Uyise wala mawele uCarlos Morales akakwazanga ukuba khona ngesikhathi umkakhe ebeletha ngenxa yokuthi ubesemsebenzini wakhe lapho esebenza khona njengosonkontileka.
OLUNYE UDABA: Uthole amawele amahlanu obebizwa ngenyumba
Usuku lwenjabulo kuCarlos luphenduke elokukhala nokugedla kwamazinyo njengoba luphethe ngokulahlekelwa ngunina wezingane zakhe.
Sekusungulwe isikhwama esibizwa nge-GoFundMe ukuze kuqoqwe imali yokuxhasa ukukhuliswa kwala mawele.
Kubikwa ukuthi lesi sikhwama sesiqoqe imali elinganiselwa ku-$258 000.
Uyise wala mawele uthe uzothatha izifundo ukuze aqinisekisa ukuthi ukhulisa izingane zakhe ngendlela efanele.